ग्यालक्सी S10 र नोट 10 उडान एन्ड्रोइड 10 स्थापना भएको | Androidsis
एन्ड्रोइड १० स्थापना भएको सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S10 र नोट १० उडान
जब तपाइँ तपाइँको मोबाइल अपडेट गर्नुहुन्छ तपाइँले लिने अपेक्षा गर्नुहुन्छ ग्यालक्सी एस १० र नोट १० प्राप्त गरेका ठूला प्रदर्शनहरूले बढावा दिएका छन् एन्ड्रोइड १०. ट्वीटरमा एक प्रयोगकर्ताको रूपमा रिपोर्ट गरिएको छ, चिप ड्राइभरमा भएको परिवर्तनले टर्मिनलमा ठूलो सुधार ल्याएको छ।
ती प्रयोगकर्ताहरू जसले आफ्नो ग्यालक्सी एस १० र नोट १० अपडेट गरे पछि ओडिन, र रिसेट को समस्या बाट पार गर्न बिना मोबाइललाई शून्य गर्न, तिनीहरू गतिबाट आश्चर्यचकित भएका छन् जुन सबैले लिएको छ र ब्याट्री प्रदर्शनमा कुनै क्षति बिना। हामी किन व्याख्या गर्छौं।
TODO यो "तालिकाकर्ता" वा "तालिकाकर्ता / DFVS" मा परिवर्तनको कारण हो। जुन एक्निसस 9280 २10० चिपलाई "प्रत्यक्ष" भन्नुको लागि जिम्मेवार छ, र नोट १० को मामलामा यो ynnm आर्किटेक्चरको साथ Exynos 9825 7२XNUMX हो।
ट्विटरमा Andre एफ टिप्पणीको रूपमा, चिप प्रोग्रामरमा परिवर्तनहरू तिनीहरू छिटो र अधिक आक्रामक छन्, त्यसैले उपकरणको प्रतिक्रिया द्रुत रूपमा वृद्धि भएको छ। यस समयमा ब्याट्रीले धेरै पीडा भोग्दैन जस्तो देखिन्छ, र यो दिनको ब्यबहारले कसरी व्यवहार गर्ने भनेर हेर्नु आवश्यक पर्दछ। जहिले पनि स्थापना वा अपडेटबाट तपाईंले यसको लागि प्रतीक्षा गर्नु पर्दछ "व्यवस्थित"।
एक सुधार हामी ग्यालक्सी नोट १०+ मा आफैलाई साक्षी दिन सक्षम भएका छौं (MKBDH जस्तै आफ्नो अन्धा परीक्षणको साथ चित्रमा) र त्यसले अनुभवलाई सबै मार्गमा उडान गर्दछ; विशेष गरी नयाँ इशाराहरूको साथ र यसले तपाईंलाई खेलहरू, अनुप्रयोगहरू र अन्य बिचमा कुनै प्रकारको ढिलाई नगरीकन सार्न मद्दत पुर्‍याउँछ र यो यो छ कि यदि तपाईसँग संसारमा सबै औंलाहरुमा छ भने।
हामीले प्रदान गर्ने ग्राफिक्स ग्यालक्सी S10 र शोका हुन् एन्ड्रोइड and र एन्ड्रोइड १० को साथ एस १० बिचको प्रदर्शन भिन्नता। तल तपाईले मिस मा समय देख्न सक्नुहुनेछ यसले कामको लोड सुरु गर्न लिन लिन्छ र फ्रिक्वेन्सीले यसले बायाँको मानहरूमा गर्छ। प्रदर्शन देखिने भन्दा बढी छ र तपाईं एक S10 मा जाँच गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं यो हात मा छ भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » एन्ड्रोइड १० स्थापना भएको सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S10 र नोट १० उडान
B. रातहरू। ठिक छ, मेरो मामला मा यो मोबाइल पुन: शुरू रोक्दैन। म यो SAT मा लिन्छु र उनीहरूलाई थाहा छैन। तिनीहरूले यसलाई कारखानाबाट पुनःसेट गरे तर यो बेकार छ, यो उस्तै रहन्छ। थप रूपमा, निरन्तर अनुप्रयोग त्रुटिहरू र ती पनि अनुप्रयोगहरूलाई एक्लै छोडिन्छ। अरू कोही उसलाई हुन्छ?
प्रेस भविष्यको धेरै नयाँ नयाँ स्टाइलिश मार्कडाउन नोट सम्पादक हो
गुगल पेन स्पेनमा आईएनजी डाइरेक्टससँग पहिले नै उपयुक्त छ